ဖုန်းထဲက contact တွေကို Google မှာ backup လုပ်ပြီးပြန်ယူနည်း – DigitalTimes.com.mm
ဖုန်းထဲက contact တွေကို Google မှာ backup လုပ်ပြီးပြန်ယူနည်း
ဖုန်းထဲက contact တွေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်သွားခဲ့သည်ရှိသော်…
ဖုန်းပျက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျောက်သွားလို့အသစ်ဝယ်လိုက်လို့ contact တွေမမှတ်မိတော့ဘူး မရှိတော့ဘူးဆိုတာ တော်တော်ဆိုးတဲ့ဒုက္ခပါ။ ဒီတော့ ပျက်ပျက်ပျောက်ပျောက် ကိစ္စမရှိအောင် ကိုယ့်ဖုန်းထဲက contact တွေကို သွားသိမ်း ပြန်ယူလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြမယ့်နည်းလမ်းကတော့ Google အကောင့်မှာ တိုက်ရိုက်သွားသိမ်းတဲ့နည်းလမ်းပါ။
contact တွေကို backup လုပ်ဖို့ Andriod ဖုန်းရဲ့ “Contacts App” ကိုသွားပါ။ More ကနေ “Setting> Move device contacts to” ကိုသွားပြီး ပေါ်တဲ့ထဲက Google ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Google အကောင့်မှာသွားပြီး contact တွေကို backup လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Gmail အကောင့်ကိုသွားပြီး Gmail ဆိုတာရဲ့ဘေးက option ေလးကိုနှိပ်လိုက်ရင် Gmail, Contacts, Tasks ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်။ contact ကိုရွေးပေးပြီး ကိုယ့်ဖုန်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ Gmail အကောင့်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ contact တွေအကုန်လုံးကို အော်တို restore လုပ်ပေးမှာပါ။
ဒီနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာတော့ Contact app မှာမဟုတ်ဘဲ Setting > Contacts > Copy Contacts> Copy form Phone ဆိုတာနဲ့ contact ထဲမှာရှိသမျှ ဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အကုန်လုံးကိုရွေးပေးပြီး Copy ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Copy Contact To မှာ ပေါ်တဲ့ထဲက SIM ကဒ်တွေထဲသိမ်းမှာလား? Google အကောင့်မှာသိမ်းမှာလား? ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ဆီကို ရွေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ SIM ကဒ်တွေထဲသိမ်းရင် ဖုန်းပျက်တာမျိုးက ကဒ်ပြန်ထုတ်လို့ရလို့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ပျောက်သွားရင် ခိုးခံရရင်တော့ ကွိုင်တက်မှာပါ။ ဒီတော့ Google အကောင့်ထဲကိုသိမ်းတာ စိတ်အချရဆုးံပါပဲ။
ပြန်ယူချင်ရင်တော့ ခုနကအတိုင်းပါပဲ Gmail ကနေ ပြန်သွားယူရုံပါ။
တချို့ဖုန်းတွေကျတော့လည်း Contact ရဲ့ Menu ကနေ export လုပ်ပြီး Google drive မှာသွားသိမ်းလို့ရပါတယ်။ ပြန်ယူရင်ကတော့ အပေါ်ကနည်းအတိုင်းပါပဲ။ မဟုတ်ရင်လည်း import ကနေ Google အကောင့်ကိုရွေးပြီးပြန်ယူလို့ရပါတယ်။
ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတာမို့ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ setting ကလည်းတူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ခြုံပြောရရင် Contact မှာ Menu/ More ကိုရှာကြည့်ပါ။ မတွေ့ရင်တော့ Setting ကိုသွား Contacts ဆိုတာကနေဝင်ပြီး Google အကောင့်ဆီပို့ပါ။ Mi ဖုန်းတော်တော်များများမှာတော့ Contact မှာ Menu မတွေ့ရင် Contact app မှာပဲ recent task ခလုတ် (အစင်း၃ကြောင်း) ကိုနှိပ်ထားလိုက်ရင် ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီကနေ export contact / share contact ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ တော်တော်များများအဆင်ပြေကြပြီထင်ပါတယ်။
Apple က ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ Mac Pro အသစ်ကို ရောင်းမယ်လို့ အတည်ပြု
လူသိနည်းပေမယ့် အသုံးဝင်တဲ့ Google ရဲ့ Tools လေးတွေ